Qophii : Abbaas Ibnul IslamIslaamummaa keessatti baatiin Ramadaana baatiiwwan biroo caalaa Muslimoota biratti baatii jabaadha. Baatii kana keessa dalagaawwan gaggaariin Rabbiin biratti dachaa dachaan hisaabamu, baatii araramaa, kan araarama itti argatan, kan ibidda jala bilisa itti bahaniidha. Akkas
Masjiidal Aqsaa Kutaa 8ffaa
Hooggantoonni Salahaddiiniin bakka bu’an, dachii Shaam, Misraa fi iiraaq bulchuuf tattaaffii godhanii jiru. Haa tahu malee dachii bal’aa san akka hoogganaa isaanii isa duraa sanitti bulchuun heddu itti ulfaate. Salahaddiin hawaasa muslimaa hunda biraa fudhatama guddaa argatee ture. Kanas islaamummaa
Masjiidal Aqsaa Kutaa 6ffaa
Waraanni Masqalaa bakka Assafuuriyaa je’amtu eega qubateen booda, walmormii mootota isaanii jiddutti godhameen gara waraana Salaahaddiin imaluu murteessan. Kun garuu dogoggora guddaa ture. Aduu akkaan nama gubdu keessa, kilomeetira digdamaaf miilaan deemuun dirqama itti ta’e. xumura irratti hagni du
Qophii: Abuu IbtisaamMasjiidni Mana Rabbiiti. Masjiidni bakka muslimoonni jama’aan keessatti walitti qabamanii, Rabbii isaaniitiif itti sujuudani. Masjiidni bakka qalbiin Muslimootaa itti tasgabbooftuudha. Walumaa galatti masjiidni mana muslimoonni heddu akkaan jaalataniidha. Masjiidota dachii tanar
© Abu IbtisamDubartiin takka ganama hunda maatii isiitiif daabboo dalagdi. Daabboo tokko ammoo rakkataa karaa irra deemuuf jettee tolchiti. Daabboo tokkicha rakkataaf jecha dalagdu kana yeroo fooddaa manaa irra keettee, Abbaan carraa haa fudhatu jettee achirratti dhiifti. Guyyaa hunda ammoo jaarsa d
Biyyi Andaluus Mootummaa Umawiyyaatin gaafa bultu qissaan tun argamte.Waahiloota sadiihitu ture magaaloota Andaluusirraa takka kheeysatti. Sadeenuu Harreen meeshaa magaalaa fii mana jidduu namaaf geeysan. Hojii Isaanii yoo xumuran halkan goojjoo takka wajjiin galan.Gaafa tokko dalagaa Isaanii Harree
Masjiid Al-Aqsaa kutaa 5ffaa
Muslimoonni tokkoomanii kaayyoo tokkoon eega sochii eegalanii booda, jidduu irratti rakkinni jabaan tokko mudate. Rakkinni kunis ummata Muslimaa diiguudhaaf karaa saaqee ture. Hoogganaa ummata Muslimaa kan ture, Nuuraddiin Mahmud Zankii bara 1174tti addunyaa tanarraa du’aan boqote. Nuuraddiin osoo h
Masjiid Al-Aqsaa kutaa 4ffaa
Bara 1127tti, Imaaduddiin Zankii hoogganaa Moosul godhamee muudame. Imaaduddiin kaayyoo tokko qabatee lafaa ka’e. Waraana Masqalaa dachii muslimotaa keessaa qulqulleessee baasuudha kaayyoon isaa. Zankiin Abshaala Namaati. Tooftaa lolaatiifi Siyaasaa irratti nama bilchaataadha. Kaayyoo isaa galmaan
Masjiidal Aqsaa Kutaa 3ffaa
Waraanni Masqalaa eega Magaalaa Al Quds harkatti galafateen booda, guyyoota kudhaniif walitti aansee ajjeechaa garajabeenyaa raawwate. Muslimoonni kumaatamaan lakkaawaman magaalaa Alqudsiifi Masjiidal Aqsaa keessatti Ajjeefaman. Gama birootiin kitaabotaa fii wantoota islaamummaan wal qabatan hunda
Masjiidal Aqsaa Kutaa 2ffaa
Seenaa kana dubbisuu eegaluu keetiin duratti, seenaa kutaa1ffaa dubbisuu kee mirkaneeyfadhu! Kutaa dabre keessatti waa’ee ijaarsa Masjiidal Aqsaa gabaabinaan ilaallee jira. Naannoon Masjiidaa kun jalqaba Nabiyyallaahi Suleeymaaniin (AS) kan ijaarame ta’us, awaamman Impaayera Roomaa fincila yahuudaan